Bit By Bit - The ramangwana - 7.2.3 Ethics pakutsvakurudza magadzirirwo
Ethics ruchaita kubva peripheral hanya kuti nechepakati hanya uye saka achava nyaya tsvakurudzo.
Munguva digitaalinen zera, nezvetsika-kupfuura mutengo-achava hune nekurovererwa pamusoro nevatsvakurudzi. Uko, munguva yemberi, tichava vanotamburira zvishoma pamwe chii chingaitwa uye zvakawanda pamwe chii chinofanira kuitwa. Sezvo izvozvo zvikaitika, ndakamutarisira kuti mitemo-kwakavakirwa rava evanhu masayendisiti uye AD-hoc rava mashoko masayendisiti kuchaita ichishanduka akananga chinhu chakafanana zvinotaurwa nemabhuku akauya anorondedzerwa muChitsauko 6. Neniwo kutarisira kuti sezvo hwetsika anova tsvakurudzo akakurumbira zvikuru nekurovererwa, ichava nyaya tsvakurudzo pacharo. In sezvinongoitwa kuti vaongorori magariro ikozvino kupedzera nguva uye simba kuti kusimukira nzira itsva kuti hunoita isingadhuri uye rakanyatsorurama nokufungidzira, ndinotarisira kuti ticharamba Zvinoshandawo kukudziridza nzira dziri kupfuura tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira mhosva. kuchinja izvi zvichaitika kwete nokungoti nevatsvakurudzi hanya hwetsika sezvo ngakugume, asi nokuti nevatsvakurudzi hanya hwetsika senzira kuitisa munzanga tsvakurudzo.
Muenzaniso uyu muitiro ndiko kuongorora differential zvakavanzika (Dwork 2008) . Fungidzira kuti, Somuenzaniso, chipatara ave detailed utano zvinyorwa uye vanotsvakurudza vanoda kunzwisisa maitiro iyoyo mashoko. Differentially dzakavanzika algorithms vanhu vakwanise mubvunzo utano zvinyorwa kudzidza pamusoro uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. maitiro (semuenzaniso, vanhu vanosvuta vangangova kenza) apo kurerutsa ngozi kudzidza chinhu pamusoro zvinoitwa chero chipi zvacho munhu. Kuumba izvi voga-kuchengetedza algorithms mhando razova chinoshingaira nzvimbo kutsvakurudza; ona Dwork and Roth (2014) kuti bhuku-urefu kurapwa. Differential zvakavanzika muenzaniso pakutsvakurudza vemunharaunda kutora ane dambudziko yetsika, akatendeuka ndokuita tsvakurudzo chirongwa, uye ipapo kufambira mberi pairi. Uyu muenzaniso Ndinofunga tichaita kuwedzera kuona dzimwe nzvimbo mumagariro tsvakurudzo.
Sezvo simba vaongorori, kazhinji pamwe nemakambani nehurumende, kuramba kuwedzera, richava zvichioma kudzivisa dzakaoma zvetsika. Yave chiitiko wangu kuti vakawanda munzanga masayendisiti uye mashoko masayendisiti vanoona chemufungo nyaya idzi ave doro kuitwa. Asi, ndinofunga kuti kudzivirira achava kuwedzera untenable sezvo nzira. Isu, sesangano, anogona chete kugadzirisa matambudziko aya kana isu vashambire uye netambo navo okugadzira zvinhu uye zvatinoita dzinoshanda mamwe matambudziko tsvakurudzo.